TAG Video Sistem Akara Ngosi Akara di elu na OWASP Security Audit | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » News » TAG Video Sistemụ Akara Elu na OWASP Security Audit
Tel Aviv, Israel - Eprel 6, 2021 -TAG Video Systems enwetala akara dị elu maka usoro iwu nchekwa ya na-eso usoro nyocha nke abụọ na-adabere na njirisi nke Open Web Security Security Project (OWASP) mepụtara. Dabere na Paul Briscoe, onye isi ụlọ ọrụ TAG, nsonaazụ nyocha a bụ ihe akaebe maka ọganiihu Companylọ ọrụ ahụ n'inye ndị ahịa ya nchekwa dị ukwuu. TAG bu onye ndu uwa na 100% SW, 100% IP, 100% COTS / Cloud, Probing, Monitoring na Ntughari azịza, maka isi ihe anọ dị mkpa na agbasa ozi n'ikuku (Live Production, Playout, Delivery and OTT).
"Otu n'ime isiokwu kachasị ewu ewu taa bụ nchekwa," kọwara Briscoe. “Ndị ahịa anyị kwesịrị ịma na sistemụ ha dị oke mkpa na akụ ha kacha baa uru - ọdịnaya ha, ọ dị mma. TAG na-akwado usoro nchekwa nchekwa ọkọlọtọ niile dịka HTTPS na FTPS, na-enye ikike Proxy iji gbochie ịntanetị na-enwetaghị ikike, ma na-agbakwunye ọkwa nchekwa emelitere na MCM-9000 anyị. Anyị nabatara ohere iji nyocha na anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa na nyocha ahụ gosipụtara nrụpụta nke usoro ogbugba nchekwa anyị. ”
Nche nke MCM-9000 nke software TAG nwere Multiviewer na nlekota oru nyocha bu ihe nyocha nke uzo abuo. Akụkụ nke mbụ, Penetration Testing, nyochare ikike nke ihe ngwọta iji gbochie mgbalị imebi iji mebie usoro ahụ n'onwe ya, ma ọ bụ ịnweta ịnweta ngwa ndị ọzọ na akụrụngwa. MCM-9000 TAG meriri akara dị elu, na-egosi na ọ na-eguzogide ọgwụ ịnweta ikike.
Oge nke abụọ nke nyocha ahụ, nke OWASP mepụtara ma mara dị ka ngwa nyocha nyocha nke ngwa (ASVS), tụlere ikike nke MCM-9000 iji lebara anya ma belata TOP 10 kachasị egwu egwu dị egwu na-eche ndị mmepe na ngwa ngwa, gụnyere: ntụpọ ntụtụ, gbajiri nyocha na nnweta ohere, ikpughe data dị nhịahụ, ndị na-ahazi XML na-arụ ọrụ nke ọma, ndehie nchedo, ntụpọ ederede ederede, enweghị nchekasị, akụkụ ndị na-adịghị ike na ndekọ na ezughi oke. Oge nke abụọ nyochare usoro emere iji mepụta ngwanrọ na usoro nchekwa echebere iji chekwaa data megide ihe egwu. Nyochaa TAG's MCM-9000 maka nnabata na ASVS Levels 1 na 2, usoro nke na-ekwu maka ngwa nwere data dị nro.
"MCM-9000 anyị abụghị naanị na ọ dabara na njirisi nke OWASP setịpụrụ mana ọ gafere atụmanya," gbakwunyere Briscoe. “Anyị karịrị obi ụtọ na ndị ahịa anyị nwere ike nọrọ na nche na ha data na esịtidem usoro, na n'aka ha ụtụ, na-ntukwasi-obi na-echebe site ọdịnaya hackers. Nkwenye a na-eme ogologo ụzọ iji mee ka ndị nwe ọdịnaya nwee udo nke uche. ”
Kemgbe 1994, Desert Moon Communications enyerela aka mmalite, yana ụlọ ọrụ ndị isi na-enweta traction ma nọrọ "oke-uche" taa na-agbanwe agbanwe ahịa azụmahịa.
Anyị nwere njikọ siri ike na ndị na-ebipụta ụlọ ọrụ na ndị editọ iji kwado mgbalị anyị na-emechitere gị site na ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi ọma na nchịkọta akụkọ. Anyị nwere obi ụtọ na anyị nwetara nnukwu mgbasa ozi, mgbasa ozi ndị ọhụrụ, na ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ maka ndị ahịa anyị.
Desert Ọnwa na-elekọta ụlọ ọrụ na:
Otu ìgwè nke raara onwe ha nye Desert Moon, ndị ọrụ aka dị mkpa iji nyere ụlọ ọrụ gị aka iru ihe mgbaru ọsọ ya, mgbe ụfọdụ. Anyị nọ ebe a maka gị!
Ihe kacha ọhụrụ site na Desert Moon Communications (-ahụ ihe niile)
Cobalt na-agbakwụnye Onye Emepụtara Otu na Ọwa abụọ 3G-SDI todị na Pọtụfoliyo nke Amplifiers Nkesa A pụrụ ịdabere na Ya - May 13, 2021
TAG Video Systems Na-akwalite ndekọ, nyocha na ịrụ ọrụ na-akọ akụkọ dịka ịrị elu na OTT na-aga n'ihu na Skyrocket - April 26, 2021
Cobalt Enriches Encoders na Decoders nwere atụmatụ Pụrụ Iche - April 23, 2021
Previous: Clear-Com's Eclipse HX Version 12.1 Na-anapụta IP Enwekwukwa na Ike Ikuku, Streamlines Use of 5 GHz Band for FreeSpeak Edge
Osote: Ngwakọta KMH Audio-Video na-eme ka Akụkọ Mbugharị 12 na-aga n'ihu